Khuphela iifoto ezintsha ze-iPhone X | IPhone iindaba
Khuphela iifoto ezintsha ze-iPhone X
Kwaye akukho modeli intsha ye-iPhone, i-iPad okanye iMac engadibanisi ii-wallpapers ezintsha kwaye kwimeko ye-iPhone X entsha abanakuphulukana nokuqeshwa kwabo kunye nala maphephadonga. Inqaku lelo sinemvelaphi emitsha emi-6 emitsha kunye ne-6 eguqukayo.
Into emnandi ngayo yonke le nto kukuba ezinye zazo esele siziphumezile okwethutyana kwaye ezinye ziya kuthi ziphele ngokufika ngokusesikweni kwi-iOS 11.2 xa ikhutshiwe le nguqulo, kodwa okwangoku nakwabo bangafuni ukulinda ukuba babe nazo Bashiye apha bakho ukukhupha ngokupheleleyo simahla.
Imibala enamandla kunye ne-abstract eya kunika ukuchukumisa okwahlukileyo kwiphepha lodonga lwe-idevice yakho.Le mithandathu yamaphephadonga amatsha amileyo okanye amileyo esinawo afumaneka kwi-iPhone X entsha Sinokusebenzisa kuyo nayiphi na i-iPhone:
Ezi wallpapers ziqinisekile ukuba ziyamangalisa kwi-iPhone yakho kwaye nabani na ofuna ukuzisebenzisa kuzo zonke iimodeli ze-iPhone ngenxa yesisombululo se-700 × 1530. Nangona kuyinyani ukuba ezinye zazo sele zikhona kwi-beta esungulwe yi-Apple iOS 11.2. , ayingabo bonke abasebenzisi abakwinkqubo ye-beta kwaye abanofikelelo kubo. Malunga nemali iinguqu eziguqukayo siyabona ukuba zongeza amaqamza aziwayo kodwa ngeli xesha kwimvelaphi emnyama.
Ngamafutshane, imalunga nokukwazi ukusebenzisa ingxowa-mali entsha kwi-iPhone yethu nangona ingeyiyo imodeli entsha esandula ukwaziswa ngokusesikweni ngolwesiHlanu odlulileyo kwaye ebonakala ngathi ivune impumelelo emangalisa ngokwenene. Okwangoku siqhubeka ngesitokhwe esisezantsi ngenene kunye nokuthunyelwa kwabo banako ukugcinwa ukusukela kumhla wokusungulwa kwayo. Ixesha lokuhanjiswa alikanciphiswanga kwakhona okanye kwezinye iimeko alihambanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Khuphela iifoto ezintsha ze-iPhone X
Isisombululo esoyikekayo. Ngaba uyenzile umfanekiso okwiphepha lodonga ukuze uyipapashe kamva?
I-iPhone X yeyona iPhone ilula ukwaphula imbali
Ithiyori ziqala: Kutheni le nto i-iPhone X ineebhetri ezimbini?